သဇင် | Myanmar Model
သဇင် Like this:Like Loading... 146 comments so far Your love
July 11, 2008	I do missed No songs.Why didi u do so .?Carry on Thazin.
July 14, 2008	I love you
tun tun nat matwe par nat
July 23, 2008	hello
ma ma phit naing yin lay , ma ma yat photo ko pot pay pa lar byar
July 23, 2008	ckchitkoko@gmail.com
August 28, 2008	ma ma ka hla par tal.thu myar twe nae` ma to aung nay mha htoo tar lay. mama ka ma thu aung nay naw.
August 30, 2008	ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်. မျက်စိစပ်တယ်ဆိုတာ လိုပေါ့၊ တကယ်တော့ သီချင်းဆိုဆို၊ သရုပ်ဆောင် ပဲလုပ်လုပ် အနုပညာ ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး၊ သရုပ်ဆောင် တစ်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ပိုက်ဆံရှိရမယ်. ရုပ်ရည်ရှိရမယ်. အရှက်အကြောက် ကင်းရမယ်. ဒါပေမယ့် Sexy တော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့…..
တကယ်တော့ အမိတို့ကြောင့် မြန်မာမိန်ကလေးတွေအတုယူ မမှားစေချင်ပါဘူး………….
မင်းတို့ တွေအဲဒီလို ကြပ်ကြပ်ဝတ်……အမိတို့ကို စိတ်နဲ့ပြစ်မှား ခံနေရတယ်ဆိုတာ သတိထားပါ…အေးလေ ဒါပေမယ့် အမိတို့က ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး…. အရှက်မရှိတာ ကို
September 22, 2008	i want to fuck u
September 26, 2008	သူများတွေသိပ်မပြောတက်ဘူးဗျာ မမ လှတယ် သီချင်းဆိုတာကောင်းတယ် သရုပ်ဆောင်လဲကောင်းတယ် ဒါပေမယ့်မကြိုက်ဘူးဗျာ
September 28, 2008	Hello!
September 30, 2008	နေကောင်းလာ၊
October 17, 2008	Hi! i like you and sexy u. how much i can give you money?ok?
October 26, 2008	သင် က လှပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ မကဲပါနဲ့
November 2, 2008	စောက်ရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ..
November 26, 2008	I like u.
December 1, 2008	သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အတွက် ဘာတွေရင်းနှီး ပေးဆပ်ရတယ်ဆိုတာ … ကျွန်တော် နားမလည်ပါဘူး…
ဒါပေမယ့်… သဇင်ဆိုတာ ကြယ်တစ်ပွင့်ပါ … အရောင်ထွက်ဖို့ နဲ့ အမြဲထွက်နိုင်ဖို့ ဘာအရေးကြီးလဲ… သေချာစဉ်းစား… မှန်မှန် ဆုံး ဖြတ်ပါ… အနုပညာမှာ ကြိုးစားနေတဲ့ သူတိုင်းကို အားပေး နေပါ တယ်..
January 8, 2009	မင်းလေးက သိပ်မိုက်တယ် ဆော်ချင်တယ်ကွာ
ဖြစ်နိုင်ရင် ၄-၅ ခါလောက်ပါ ပြောရင်နဲ့တောင် ထလာပြီ
January 10, 2009	ညီမလေးကို ကိုယ်ဖြစ်နိုင်ရင် တွေ့ချင်တယ်(လူကိုယ်တိုင်)
January 30, 2009	အောင်မြင်အောင်ဆက်ကြိုးစားပါအားပေးပါတယ်
February 6, 2009	i am sorry for in inya road.that thay i cannot control my mind.dont afraid me.
February 6, 2009	you remember that/
Iamalttle bad boy.
you are acting on inya lakewith tun tun/
February 15, 2009	gmail account သိချင်လို့ပါ
February 25, 2009	you are the one who is beautiful in the model and i want to know your email.
March 22, 2009	သဘောကျတယ် သိလား
April 10, 2009	မင်းသရုပ်ဆောင်တာ မဆိုးပါဘူး..သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး..သီချင်းဆိုတာလည်းမဆိုးပါဘူး..ဒါပေမယ့် မင်းဟာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဆိုတာ တော့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားစေချင်ပါတယ်.. ခေတ်လူငယ်မိန်းကလေးတွေ အတုယူစရာဖြစ်အောင် လမ်းပြကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်….
April 27, 2009	အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ
May 13, 2009	မင်း..လှတာကိုငါလက်ခံတယ်
May 14, 2009	လှတော့လှတယ်……………
June 8, 2009	အရှုးတွေပါ
June 9, 2009	မမကအရမ်းတော်တာပဲနော်
July 8, 2009	အရမ်းရူးသွပ်တယ်………မင်းလေးနဲ့ပတ်သက်သမျှတွေအများကြီးသိမ်းထားတယ်.
July 8, 2009	မင်းဘယ်လက်သကြွယ်ကလက်စွပ်ကတကယ်လား…….
July 18, 2009	you were so cute, i love your songs much, but never see you personally.
July 25, 2009	မမက အရမ်းကောင်တာပဲနော်
မမ အခွေထဲက တကယ်လားဟင်
August 4, 2009	မမကိုမောင်လေးအရမ်းချစ်နေမိပြီ
August 4, 2009	မမအိမ်ကိုမောင်လေးလားသေးတယ်
September 13, 2009	မမ ပေါနေတာကိုလို့ မောင်လေးကိုအကြောင်းပြန်လေ
မမကလဲ မကောင်းပါဘုး နော်
January 30, 2010	မင်းကြောင့် ဒို့မြန်မာမိန်းခလေးတွေ သိက္ခာမကျပါစေနဲ့
milwaukee,Wi. aus ,ko ko
April 25, 2010	သတိယတိုင်းလွမ်းနေမယ်……နော်…မမသဇင်…..
August 4, 2010	ကိုလည်း ဂီတာ ဆရာကြီး တစ်ယောက်ပဲ … သဇင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်
အရမ်းကောင်းတယ် .. တေးရေးဆရာ : အရိုးရေးထားတယ်
ကိုယ် အသည်းကွဲဖူးတယ် ..
အဲ့ဒါကြောင့် မိန်းခလေးတွေကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဖူး .. ကိုယ့် ဘ၀မှာ
ဂီတ .. စာပေ .. ကွန်ပျူတာ .. အရေးအကြီးဆုံးပဲ
သဇင့်ကို ကိုယ့် သီချင်းလေး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လေးတွေနဲ့ အဆွေးအမြေ့
စိတ်ဝင်စားရင် apaythakho.lamin@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပေါ့လေ
May 26, 2011	်အရာအားလုံးအောင်မြင်ဖို့အတွက် နေ့စဉ် ဘာသာရေးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါလို့
တိုက်တွန်းပါတယ် …. လောကဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့အတွက်
September 19, 2011	a tu ka kan naing yal taw taw shi tal
ngar kar 1 kar see bu tal tu kar
tu taw taw kan naing tar pa`
September 30, 2011	တစ်ကောင်သေ၊တစ်လေပုတ်ဆိုတာ အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပြောတာ
တစ်ယောက်အတွက်နဲ့အနုပညာအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံး သွားတော့တာဘဲ
အနုပညာဆိုတာ ကောင်ကင်ဘုံကဘုရားသ္ခင် ကောင်ကြီးပေးထားတဲ့အရာဘဲ
အနုပညာကိုစော်ကားရင် ကောင်ကင်ဘုံကဘုရားသ္ခင်ကို စော်ကားတာနဲ့ အတူတူဘဲ
အနုပညာကိုလေးစားရင် ကောင်ကင်ဘုံကဘုရားသ္ခင်ကို လေးစားတာနဲ့ အတူတူဘဲ
ဘုရားသ္ခင်က ကျွန်ုပ်ကိုချစ်သလို သင့်ကိုချစ်ပါတယ်
November 22, 2011	0143583887
November 22, 2011	hla tal
November 27, 2011	မမသဇင်ကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ . မမသူဌေးကျွန်းမှာ သီချင်းလာဆိုတုန်းက မအားလို့မကြည့်ဖြစ်လိုက်တာ တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး . မမကိုခင်ချင်ပါတယ် . အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် မောင်လေးအကောင့် blsk74@gmail.com ကိုအပ်ပေးပါနော် . မောင်လေးမျှော်နေမယ် . မမဒီထက်မက အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ ……
January 7, 2012	မမကအရမ်းလှပါတယ်ကျနော်အရမ်းနှစ်သက်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပေါ့နောက်လဲဒီထက်မကတိုးတက်တဲ့အနုကညာရှင်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်thawzinsat1500@gmail.comကိုဖြစ်နိူင်မယ်ဆိုရင်အပ်စေချင်ပါတယ်အမြဲတမ်းအာပေးနေပါတယ်
March 30, 2012	မ ကဖင်ဘာလိုကြီးနေတာလဲ
April 5, 2012	ငါလိုးထားလို့ကြီးနေတာပေါ့လီးမှပဲငါ့လီးဘယ်လောက်ကြီးလဲသဇင်ကိုမေးကြည့်ပါလား
May 16, 2012	ညီညီ မဂ်လာပါ ။
မသဇင် သို့ ခုမဂ်လာဆောင်ပြီးပြီလား မဂ်လာပါဆောင်မယ်ဆို ညီညီ ကိုဖိတ်နှော်
ညီညီ တော့သူငယ်ချင်းတွေလာကြမယ် အမေရိက ကိုမသွားဘူးလား ခု ညီညီ …။
အမေရိက နယူယော့ ပြည်နယ် ဘဖလော မြို့မှာအဝေးသင်ကျောင်းတက်နေပါတယ် ။
ပျော်ဖို့ကောင်းသလိုစိတ်ညစ်ဖို့လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ် မိနစ်= မီးနင်း တွေက
မတူဘူး အေးတော့ အသံထွက်ရခက်ပါတယ် ။
အေးဒါတွေကိုခဏထားပါအုံး အမေရါက ကိုသွားရင် ညီညီ ကျုပြောနှော် Airl မှာ
ညီညီ အလုပ်လုပ်နေပါတယ် ။
May 17, 2012	မဂ်လာပါ ။
ညီညီ ဓာတ်ပုံတွေရပါတယ် အဟီလှတယ်နှော် အမေရိကန်မှာတုံးကဆို အတော်လည်း
ကိုချောတယ်နှာ် အေးအေး လူမိုက်ကလေးတယောက်အကြောင်း သီးချင်းနားထောင်
ကောင်းတယ်နှော် အေးကောင်တွေ့ရင်တခ့လောက်ပြနှော် တွေ့ချင်လို့ပါ ။
Aww အေးကောင်းလေးကထိုးမှာလားမသိဘူးနှော် အေးသီချင်းလေးကိုပါပေါ့ပေး
နှော် အားမှ မအားရင်လည်းမပေါ့ပါနှင့် ။
June 5, 2012	nyinyi Google+
nyinyi Good Morning မဂ်လာပါ ။
LAZY Clbu US tour Florida Thazin … }
ပါလိမ့် လှပါလား သဇင်လောက်ချောပါလား အဟီ ညီညီ စာမေးပွဲတုံးက အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စု အရမ်းချောတယ်နှော် ညီညီ ဆီသို့ဓာတ်ပုံလှလှလေးတပုံပေါ့နှော်..
အားရင် မအားရင်တော့ မပေါ့နှင့် အရမ်းအောင်မြင်ပါတယ် ခုဆိုချောလည်းချောလှ
လည်းလှတယ် မဂ်လာပါနှော် ။
July 7, 2012	သဇင်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်movieလေးကြည့်ချင်တယ်။ဘယ်ျမှာရှာရမလည်း ပြောပေးပါဦး
July 16, 2012	ဟုတ်တယ်..သတင်းကြားတယ်..ဘယ်မှာကြည့်ရမလဲ..
July 17, 2012	ဘယ်သူတွေဘာတွေဘဲပြောပြောကိုကြိုးစားမှကိုယ်အောင်မြင်မှာမဟုတ်လားမမရယ်.
July 17, 2012	ဘာလည်းသူများတွေလို့အွန်လိုင်းပေါ်ကိုတတ်ရင်နာမည်ကြီးတယ်လို့ထင်နေတာလားအဲဒါကြောင့်videoတင်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား နောက်ကိုသေချာရိုက်ပြီတင်ဂုတ်ဆွေနေတဲ့ပုံပါပလေ့စေ……
July 19, 2012	မက တော်တော် မိုက်တယ်နော် လိုးချင်စရာကြီး ဟိဟိ နာ့ တောင် လိုးချင်လာတယ် မသဇင် ကို ခံမှာလား ခံမယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်နော် မကို လိူုးချင်နေတဲ့ ကောင်လေး
July 23, 2012	သဇင်ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ နဲ့ ဆိုင်လား သူသမိုင်းကိုသူရေးမှာပေါ့ မင်းတို့ ရေးဖို့ လိုအပ်လိုလား ကိုယ့်ထမင်းကိုယ့်စားပြီ ဂျီးထော်နွားကို မကျောင်းချင်ပါနဲ့ ကွာ မင်းတို့ နှမ အမတွေ သဇင်လို့ မဖြစ်အောင်ဂရုစိုက် ကြားလား သူရိန်ဆိုတဲ့ငါပြောတာ
July 26, 2012	မင်းကလီးမို့လို့နာတာလား မင်းအမေတွေမင်းအမတွေဖင်လိုက်ခံရင်မင်းကြိုက်လား သူတို့ကလည်း သဇင်စောက်ပတ်ယားပြီးဖင်လိုက်ခံနေလို့ပြောတာကွ မင်းကသဇင်ဖက်ကလျောက်နာနေတာမင်းကောဖင်ခံချင်လို့လားကွ ငါ့ဒုတ်ကကြီးတယ်ျနာ်
July 27, 2012	သဇင်ဖင်ပေါက်ကြီး လောက်ကျနေပီ..
July 27, 2012	သဇင်စောက်ပတ်ကြီးကို ကပ်ပလီနှစ်ထပ်လီးကြီးနဲ့ လိုး…ဖာသယ်မ စောက်ပတ်ပြဲမရဲ့ စောက်ပတ်ယားပုံကတော့ အော့နှလုံး နာစရာ..စောက်ရှက်မရှိတဲ့ ဖာသယ်မ သဇင်လို ကောင်မတွေကြောင့် အမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေ သိက်ခါကျနေရတာ…ဒီကောင်မ သဇင်ရဲ့ ဖင် ခုဆို လောက်ကျနေလောက်ပီ
July 27, 2012	ဖာသည်မ သမီး ဖာသည်မ ဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူးကွာ..သဇင်က အစကတည်းက ၁၄နှစ်သမီးကတည်းက ဖင်ခံ စောက်ပတ်လှန်ပေးနေတာ…ခုလို လိုးခံနေတာ..ဘာမှ မထူးဆန်းပါဘူး သယ်ချင်းရာ..စောက်ပတ်ယားမ သဇင်ကြောင့်တော့ နိုင်ငံ သိက်ခါ ကျတာပေါ့..ခုတော့ နွားတစ်ကောင်က သဇင်လှည်းကျိုးကို ထမ်းနေပီ…ဖြစ်နိုင်ရင် စောပတ်ယားမ စောက်ပတ်ပြဲမ ခွေးမသဇင် မြန်မာ ပြည် ပြန်မလာနဲ့တော့
July 27, 2012	ခွေးမင်းသမီး ဖာသည်မ သမီး ဖာသည် မင်းသမီး သဇင် စောက်ပတ်ပြဲမကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ကြည့်ခဲ့ရတာ နာလိုက်တာ…ဒီလို ဖာခံစား နေမှန်းသိရင် နင့် မိသဇင် ခွေးမျိုးမရဲ့ ခွေးကားတွေကို အချိန်ကုန်ခံ ငွေကုန်ခံ ကြည့်မနေဘူးဟေ့
July 27, 2012	ခွေးမင်းသမီး ခွေးမ သဇင်နဲ့ ခွေးမသဇင်ကို လိုးနေတဲ့ ခွေးမျိုးတွေ..ဒီလို စောက်ရှက်မရှိ တစ်နိုင်ငံ တစ်ခွေ ၁၀၀နဲ့ ရောင်းနေတဲ့ သူတောင်းစားမ ခွေးမ အယုတ်တမာမ ခွေးမ သဇင်နဲ့ ခွေးရိုးကိုက်နေတဲ့ ခွေးကောင်ကို သတ်ပစ်ဖို့ မြန်မာပြည်မှာ FUN ဖွဲ့ကြပါစို့
July 27, 2012	ခွေးမသဇင်နဲ့ ခွေးရိုးကိုက်နေတဲ့ ခွေးသားကို တစ်နိုင်ငံလုံး လူထုဆန်ဒ ခံယူပဲလုပ်မယ်..နောက်ပီး လမ်းလယ်က ဓာတ်တိုင်မှာ ခွေးမသဇင်ကို ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပီး ဓာတ်တိုင်မှာ ချိတ်မှာ ခွေးမ သဇင်ရဲ စောက်ပတ်နဲ့ ဖင်ပေါက်ကို ဓားချွန်နဲ့ ထိုးကြမယ်…အဲဒီ စောက်ပတ်ပြဲမနဲ့ ခွေးမသားကို ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ ချီးတွေ ကြွေးမယ်..သဘောတူကြလား…ခွေးမသဇင်နဲ့ ခွေးရိုးကိုက်နေတဲ့ ခွေးမသားကို တွေ့တဲ့ နေရာ သတ်ပစ်ကြ
July 28, 2012	အော်
August 5, 2012	နောက်ထပ် ဒီထက်ပိုပြီးလှတဲ့ပုံလေးတွေရှိရင်ထပ်တင်ပေးပါအုံး။ အားပေးလျှက်
August 8, 2012	မမသဇင်သောက်ရမ်းတုံးတာပဲဗျာ။ဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မပြောနဲ့ ကလေးတောင်သိလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ပေါ်ပြူလားဖြစ်ချင်လို့လား။ပရိတ်သတ်ကို ဂရုမစိုက်တာလား။တုံးတာလား..ချစ်သူကိုယုံကြည်ပြီး အရိုက်ခံတယ်ဆိုရင် မမ က အရမ်းသဘောလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့…..
August 8, 2012	ဘာဇြစ်ဇြစ်ဘယ်လိုနေနေဘာပဲဝတ်ဝတ်ဘာကြောင့်ဘဲဖြစ်ခွင့်လွတ်တယ်
August 12, 2012	ခွေးမသဇင်ရဲ့ ခွေးမဇာတ်ခင်းနေတာ ကြည့်ရတာ ရွံ့လိုက်တာ..ခုလို ဖာသည်မမှန်းသိရင် ဒီကောင်မစုတ်ကို လီးတောင်မကြည့်ဘူး
August 12, 2012	ခွေးမင်းသမီး သဇင်၇ဲ့ စောက်ဖင်ကြီးကို ဖြဲဖြဲပီး လီးကောက်ကြီး လိုးနေတဲ့ အခန်း(၄) ဗီဒီယိုကို ဒုတ်ကြီးမောင် ၀က်ဆိုဒ်မှာ ကြည့်နိုင်ပါပီခင်ဗျာ..ခွေးမင်းသမီး သဇင်ရဲ့ ခွေးရည်တွေ ရက်နေပုံက..အတော် ရွံစရာ ကောင်းတာ…ကြည့်ခြင်ရင် ဒုတ်ကြီးမောင် ၀က်ဆိုဒ်ကြွပါ
August 12, 2012	ဗိုက်ဆာလိုက်တာ
August 12, 2012	မြန်မာပြည် ပြန်လာရင် နင့်ကို လိုးသတ်ပစ်မယ် စောက်ရှက်မရှိတဲ့ ဖာသယ်မ
August 16, 2012	သဇင်ဆိုတာမုန့်လား……..မုန့်ဆိုရင်တော့စားမှာပဲ။ရေး-လှတော
Htin Shar Aung
August 18, 2012	အော် သဇင်သဇင် အရင်ကတော့ငါ့လီးစုပ် အဖုတ်ဖြဲပြီးအလိုးခံခဲ့တဲ့သဇင် အခုတော့
လီးသစ်မြင် လီးဟောင်းပစ်သွားပြီပေါ့ ။စောက်ပတ်မဲမရဲ့။
August 18, 2012	မင်းတို့ကောင့်တွေ့အကုန်လုံးငါမဆုံးမရင်ဘယ်ကောင်ဆုံးမမလဲမသိဘူးသူဘာသာသူဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာမင်းတို့အမူပါလို့လား။သူလဲသူအကြောင်းနဲ့သူပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကောင့်တွေသူများမကောင်းကြောင်းပြောတာကလဲငါတို့မြန်မာတွေ့ရဲ့သိက္ခာကိုအောက်ကျအောင်လုပ်နေတာပဲမင်းတို့ရေးထားတဲ့ဟာပြန်ဖတ်ကြည့်ကြပါလား။မင်းတို့ကတစ်နားကနေနှစ်နားဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပဲ။ဟိုကောင့်မလဲနောက်တစ်ခါဒီလိုထက်ဖြစ်ရင်ငါနဲ့တွေ့မယ်။
August 21, 2012	စောက်ကောင်မ နင်တို. အဲ.လိုတွေဝတ် နေမှတော. အပြင်က ဟာ မတွေလဲ နင်တို.လို ပေါ်ချင်မှာ ပေါ. ငါ နင်.မိဖ တွေ ကို အာတောင်နာတယ် နင်.ကြည်.ရတာ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်လိုရောက် နင်တို.က ရှေ.ဆောင်လမ်းပြလုပ်ရမှာဟ နင်.အဖေက အမေရိကန်လား နင်.အမေကရော ဘာမို.လို.လဲ အေးနင်ကရော ဘာလဲ မြန်မာဆိုမြန်မာလိုနေ မြန်မာလိုဝတ် ငါတို.ကတော.ပေါ်လေကြိုက်လေ ကြည်.လေ ပြစ်မှားလေ ကြာရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မုဒိန်းမူ.တွေ များများ လာတော.မှာ
September 7, 2012	ကြိုးတုပ်ပြီးခံရတာကောင်းလား။လုပ်ချင်တယ်
September 12, 2012	ကျွန်တော်အကောင်.က loveheromkk44ပါအမအကောင်.လုသိချင်တယ်ပေးလို.ရမလား
September 22, 2012	မိုက်တယ်နော်….မမသဇင်က..တကယ်ကြိုက်တယ်..မမပုံတွေကိုလေ…နောက်ထက်လန်းတာလေးတွေ ရိုက်ပြီးရင်ပို.ပေးနော်..မောင်လေးကို
October 29, 2012	မမကိုအရမ်းကြိက်သွားပြီမနေနိုင်အောင်
November 2, 2012	သောက်ကောင်မဖာသယ်မ
November 6, 2012	မမရဲ့အင်တာနက်မှာပြန်နေတဲ့ခွေလေးကမိုက်တယ်နော်မမကဖီး(လ်)သိပ်ခံတတ်တာပဲ.ကြိုးတုတ်ပြီးချတဲ့အကွက်ကမိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရလိုက်လဲမောင်လေးကသိန်း(70)ပေးမယ်အိပ်လို့ရမလား
November 12, 2012	လူ့လောကတွင် ဘယ်သူမဆိုမှားတတ်သည်။ ဖြစ်ပြီးသားပြသနာဘယ်တော့မှ ပြင်လို့မရပေ။တစ်ချိန်တွင် ၄င်းအမှားကြောင့် သူ့ထံတွင်လည်းခံစားချက်များ ရှိနေလိမ့်မည်။ သူမအားမည်သည့်နည်းနှင့်မဆို အားပေးစကားသာဆိုသင့်သည်။
November 30, 2012	I like Thazin
December 18, 2012	စလာတည်းကိးက No ပါဆို ဘယ်ကကောင်းတော့မှာလဲ
December 31, 2012	အောကားအသစ်ရိုက်ရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်လို့ရအောင်ရိုက်ပါ အရင်ကားတွေကြည့်ရတာအားမရဘူး
December 31, 2012	သဇင် မင်းပါးစပ်ကိုလိုးချင်တယ် ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ အရင်လူတွေထက်ပိုပေးမယ်
January 2, 2013	အတော်ကိုစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့မရှိမဖြစ်မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ
January 9, 2013	ကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုသဇင်ခန္ဓာကိုယ်ကို
January 30, 2013	ချစ်တယ်မမသဇင်
Nay Min soe
February 23, 2013	I like ! gtalk acc plz
February 24, 2013	သဇင်ကမြန်မာမလား
April 2, 2013	မသဇင်လိုးချင်လို့၇မလား
April 2, 2013	မင်းသရုပ်ဆောင်တာအရမ်းကောင်းတယ်တဲခိုခန်းထဲမှာလေဒူးလေးထောက်ပြီးစောင့်နေတဲ့ideaလေးကိုကြိုက်တယ်naymakha41ကိုအပ်လိုက်
April 7, 2013	မင်းက်ိုငါလည်းလိုးချင်တယ်
May 16, 2013	အော် ပိုက်ဆံမရှိလို့ လား အဲဒီလိုမှန်းသိရင်ငါအရင်လိုးပါတယ်
May 16, 2013	မသာမ စောက်ပက်ပြဲမ သဇင်
May 17, 2013	အမသဇင်ကို….အရင်တုံးကလေးစားခဲ့တယ်.. အမရဲ့အနုပညာကိုလည်းအားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ အခုတော့ဗျာ..ကိုယ့်မြန်မာယဉ်ကျေးမူတွေရော…မြန်မာ့အမျိုးသမီးတစ်ရက်လုံးကိုရော
ဖြတ်ဆီးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့……no ပါ . . .အမ I am not like you every day………..
June 5, 2013	စောက်ဖုတ်ပေသီးလုပ်မညီး/စောက်ဖုတ်မြင်းခွာလိုးတိုင်းအာ/စောက်ဖုတ်မုန့်ပေါင်းလိုးလို့ကောင်း/စောက်ဖုတ်စောက်ခွက်လိုးရခက်/နောက်ပြီးစောက်ဖုတ်မျှော့ဆိုတာရှိသေးတယ်–သဇင်စောက်ဖုတ်ကဘာအမျိုးစားလဲသိရဲ့လား?
June 22, 2013	လှတယ်ကောင်းတယ်
June 25, 2013	သဇင် ကို ချစ်တဲ့သူ များအား လုံးစည်သူနဲ့ဆက် သွယ်ပါ
June 25, 2013	သဇင် ဆို တာဖါ သယ်မ ဆိုရင် ငါလည်း ၅၀၀ပေးမယ်
June 25, 2013	ဟေ့ဖိုး တုတ် ဖင် ခံ မ လားငါ၅CC ထိုးထား တယ်
Htoo Nay Woon
August 8, 2013	သဇင် မမ ကျွန်တောက တောင်ငူက အရမ်း လိုးချင်လို့ ကူညီပါလား နော် တောင်ငူ ၁၇၊၁၁၁ ကပါ နော်
khn mg tin
August 19, 2013	အပေးကောင်းတဲ့ မင်လိုကောင်မနဲ့တွေ့ချင်စမ်းပါ့
August 28, 2013	ဖင်ကြီးတဲ.သဇင်ကိုနာလည်နိုးပါရစေ
September 4, 2013	နင့်ကိုငါလည်းလိုးချင်တယ်
September 4, 2013	သဇင်စောက်ဖုတ်လိုးချင်တယ်ပေးမလား ပေးမယ်ဆိ်ုရင် available18101981@gmail ကိုအပ်လိုက်နော်
September 7, 2013	အခု.ညေပာနေတဲ.ကောင်တွေလီးလား
September 7, 2013	အခု.ပြောေ
September 11, 2013	မင်းကို အရမ်းချစ်တယ်
September 11, 2013	မမကအရမ်းလှပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုကြီးတော့သိသိကြီးမလုပ်သင့်ဘူးအမှားကိုသိရင်အမှန်ပြင်ပေါ့မမရယ်….အားပေးလျက်ညီမလေးဂျူဂျူးjujulay2018@gmail.com
September 24, 2013	လိုးမယ်
September 28, 2013	လှပါတယ် အသံလည်းကောင်းပါတယ်
September 29, 2013	မဆိုးပါဘူး
September 29, 2013	မင်းကလှရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဗျာ
October 12, 2013	ကောင်မလေးရေ
November 5, 2013	ချစ်တယ် မသဇင်ကို..
November 6, 2013	သူကိုဘဲကြိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်ငါတောင်မကြိုက်ဘူး အလကားပေးတောင်မယူဝူးနော်ဟဲဟဲ
February 3, 2014	မမကိုလမ်းမှာတွေ့ အရက် မောင်လေးအရမ်းလီးတောင်းတယ် မမကိုအရမ်းလိုးချင် တယ်သိလား…
March 27, 2014	သဇင်ရေ တစ်နာရီဘေယ်လောက်လဲ သိချင်လို့ပါ
March 28, 2014	သဘောကျတယ်အမြဲတန်းလဲအားပေးနေမှာပါ
May 6, 2014	l love you thazin.
May 6, 2014	l love thazin.
May 6, 2014	ကျွန်တော်ကရခိုင်ကပါ သဇင်ကိုကြည့်မိရင်း
ဆွဲချင်တယ့့် 
May 24, 2014	လှတယ်
June 5, 2014	အရှက်ကိုမရှိဘူး
June 22, 2014	အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ
June 22, 2014	အရမ်းအရမ်းကိုလိုးချင်တယ်ဗျာ
June 25, 2014	မမဖင်ခံရတာကောင်းတယ်မလား
ကျွန်တော်လည်းမမကိုလိုးချင်တယ်ခံမလား
June 25, 2014	နင်ရဲသတင်းကတောမကောင်း
August 1, 2014	အခွေသစ် မထွက်သေးဘူးလား၊သီချင်းခွေပြောပါတယ်။
August 9, 2014	သဇင် မင်းကတော့ ရစရာ မရှိုအောင် အပြေားခံနေရပြီ
August 22, 2014	very pretty မ
October 7, 2014	အရမ်းလှတယ်
October 28, 2014	ကောင်တာတွေရွှေးတင်ပါဗျာ
October 28, 2014	စိတ်တောမဆိုးနဲငါလဲမင်နဲဆွေးနွေးခြင်တယ်
November 15, 2014	ငါလည်းသဇင်ကိုအရမ်းလိုးချင်တယ်
December 2, 2014	Im Desoung Youk Yin Ninkyame Thazin Payme ahe thukhaayelo heada,.!
December 4, 2014	Im Dee Soung Youk Yin Thazin paytme Im ,.!
January 29, 2015	Im Dsoung Youk Yin Thazin Pyitme Youkgar Mayathaybular,..
July 2, 2015	မင်္ဂလာပါ
August 17, 2015	hi hello nayknow barlar,..